လူတိုင်းက Mr.Darcy (မာနနှင့်မလိုမုန်းထားအက္ခရာခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်း) ကိုဘာကြောင့်ချစ်ကြသလဲ
ဒီဗီဒီယိုမှာ Pride & Prejudice ကိုဖြိုဖျက်ပြီး Austen ရဲ့ကျော်ကြားတဲ့ဇာတ်လမ်းကိုစိန်ခေါ်တဲ့မေးခွန်းတွေကဘာလို့လူတိုင်းကို Mr ကိုချစ်တာလဲ။ ။ Darcy? အဘယ်အရာကဧလိရှဗက်အားနှစ်သက်ဖွယ်ကောင်းသောအမျိုးသမီးဇာတ်ကောင်ဖြစ်စေသနည်း။ ဒီဇာတ်လမ်းကဘာ့ကြောင့်ဒီလောက်ကျေနပ်စရာကောင်းပြီးမမေ့နိုင်စရာဖြစ်ရတာလဲ။ မင်းပုံပြင်တွေကိုလေ့လာပြီးသူတို့နောက်ကွယ်ကသိပ္ပံကိုအနီးကပ်ကြည့်ရင်မင်းဇာတ်လမ်းကိုမင်းပြန်အသုံးချနိုင်တဲ့သက်သေပြပြီးထပ်တလဲလဲပြောပြနိုင်တဲ့အခြေခံမူတွေကိုတွေ့ရလိမ့်မယ်လို့ငါအခိုင်အမာယုံကြည်တယ်။ ဒါက Science of Story ရဲ့ပထမ ဦး ဆုံးဇာတ်လမ်းတွဲမှာငါတို့ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာတာဘဲ။
IT ငါ M E S T A M P S✨
2:01 ကျွန်ုပ်တို့၏အဓိကဇာတ်ကောင်ဖြစ်သော Elizabeth Bennet နှင့်တွေ့ဆုံပါ
11:56 Game-Changing Midpoint ဖြစ်သည်
၁၄:၂၁ Post-Midpoint Action Hero
#ScienceOfStory ၏နောက်ထပ်ဇာတ်လမ်းတွဲများအတွက်စာရင်းသွင်းပါ။ မင်းရဲ့ Story Matter Make ကိုလုပ်ပါ၊ မင်းရဲ့စာရေးဆရာတွေရဲ့အိပ်မက်တွေကိုတကယ်ဖြစ်လာအောင်…ဗုဒ္ဓဟူးနေ့တိုင်းရေးနေတဲ့ဗွီဒီယိုအသစ်တွေ
✨ V A L U A B L E R E S O U R C E S✨
❤️ဤအကြောင်းအရာကို + ပံ့ပိုးပါ၊ ဤချန်နယ်ကိုပံ့ပိုးပါ။ https://www.patreon.com/abbieemmons
MY နေရောင်ခြည်၏ရက် ၁၀၀ နေ့၌ကျွန်ုပ်၏ဖျက်မှုကိုဖတ်ပါ၊ https://amzn.to/2Et7fhS
MY️ကျွန်ုပ်၏ SCRerouser MASTERCLASS ကိုယူပါ၊ https: //makeyourstorymatter.teachable ...
MY ကျွန်ုပ်၏အခမဲ့ရေးသားသောစာများကိုရယူပါ။ http://eepurl.com/gFYD8z
R SCRerouser ကို ၂၀% လျှော့စျေးရယူပါ - Code "ABBIE" ကိုသုံးပါ→ https: //a.paddle.com/v2/click/49535/1 ...
MY ငါ့ SISTER နဲ့ငါ့ PODCAST ကိုနားထောင်ပါ။ https://anchor.fm/kate-and-abbie-show
🎥ငါ့ဂီယာ + စာရေးကိရိယာများ: https://abbieemmonsauthor.com/my-gear
MY ငါ့သီချင်းတွေဘယ်မှာရလဲ - https: //www.epidemicsound.com/referra ...
https: //www.youtube.com/watch? v = 2OY6j ...
https: //www.youtube.com/watch? v = j7dsr ...
→ကျွန်ုပ်၏ SCRerouser တပ်ဆင်ခြင်း
https: //www.youtube.com/watch? v = AJyGo ...
https: //www.youtube.com/watch? v = PdP-Q ...
OF O L L O W
စီးပွားရေးစုံစမ်းမေးမြန်းမှုများ: [email protected]
✨ A B O U T ✨ဖြစ်သည်
ကျွန်တော့်နာမည် Abbie Emmons ပါ၊ စာရေးဆရာများအားပုံပြင်များ၏ပါဝါနှင့်စိတ်ပညာကိုအသုံးချခြင်း၊ သူတို့၏စိတ်ကူးများကိုလက်ရာအဖြစ်သို့ပြောင်းလဲခြင်းနှင့်သူတို့၏စာရေးဆရာအိပ်မက်များကိုအမှန်တကယ်ဖြစ်လာစေသောလူနေမှုပုံစံစတဲ့ဖန်တီးပေးခြင်းတို့ကိုသင်ကြားပေးသည်။
ဇာတ်လမ်းက“ ဘာဖြစ်တာလဲ” အကြောင်းမဟုတ်ဘူး၊ ဖြစ်ပျက်ပုံကဘယ်လိုသက်ရောက်မှုရှိလဲ၊ ဇာတ်ကောင်တွေကိုဘယ်လိုပြောင်းမလဲအကြောင်းပါ။ ပြီးပြည့်စုံတဲ့ဇာတ်လမ်းတစ်ခုရဲ့နောက်ကွယ်မှာတိကျသေချာတဲ့သိပ္ပံနည်းကျရှိတယ်ဆိုတာငါယုံတယ်။ သင်လိုအပ်သောမည်သည့်ပါဝင်ပစ္စည်းများကိုသင်သိလျှင်လွယ်ကူပြီးယုံကြည်စိတ်ချမှုဖြင့်သင်၏ကိုယ်ပိုင်ပြီးပြည့်စုံသောဇာတ်လမ်းကိုဖန်တီးနိုင်သည်။ ဒါကဒီ channel မှာငါတို့အပတ်တိုင်းပြောနေတဲ့အရာပဲ၊ ဒါမင်းကတစ်ခုခုဖြစ်တယ်ဆိုရင်ဒီစာရင်းသွင်းပြီးဒီကွန်မြူနတီမှာသေချာပါ။
✨C R E D I T S ဖြစ်သည်
တရား ၀ င်အသုံးပြုမှုဥပဒေအရပညာရေးရည်ရွယ်ချက်အတွက်သုံးသောရုပ်ရှင်အပိုင်းများနှင့်တေးသံများ Pride & Prejudice (2005) ကို Joe Wright က ဦး ဆောင်ပြီး Focus Features နှင့် Universal Studios မှထုတ်လုပ်သည်။
Why Is Mr Darcy NotaLord? | Regency Era Nobility and Pride and Prejudice
Ten Things to Know before Reading "Pride and Prejudice"
Is Darcy *Actually* Rich? Regency Era Economics In Pride and Prejudice
*Pride and Prejudice* makes me feel so lonely.
I Watched (almost) EVERY Version of Pride and Prejudice -aTier List
Why Mary Bennet is ESSENTIAL in Pride and Prejudice | Foil Characters